အစေ့များအတွက်ယက် Polypropylene အထည် မှအကောင်းဆုံး အစေ့များအတွက်ယက် Polypropylene အထည် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
At Summer Show Plastic Corporationထုတ်လုပ်မှုတွင်ချို့ယွင်းချက်များကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကိုလိုက်နာသည်။ ထိရောက်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလျှော့ချမှုမှကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စျေးနှုန်းသက်သာစေသည်။
Poly ကဲ့သို့သောအထည်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည် အစေ့များအတွက်ယက် Polypropylene အထည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများမှသိုလှောင်အိတ်များ၊ မြေပြင်အဖုံးများနှင့်တာပေါ်လင်စာရွက်များ Taiwan.
ကုန်ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သတ်မှတ်မှုတွင်အရှည်၊ အကျယ်၊ အလေးချိန်၊ ရက်ကန်းသိပ်သည်းဆ၊ အရောင်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်း၊
ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကူညီကြကုန်အံ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သင့်တော်သောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒီနေ့
ပုံစံ - DP-SERIES-02
Strip count က:12 အတိုင်*15 အတိုင်မှ Wefts 10*၁၅ ရက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သော PP ယက်ထည်ဖွဲနုအိတ်များနှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်/PE ထုတ်ကုန်များ.အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များတောင်းဆိုဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်,မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရန်စူးစမ်းလေ့လာရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/woven-polypropylene-fabric-for-grain.html
အကောင်းဆုံး အစေ့များအတွက်ယက် Polypropylene အထည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အစေ့များအတွက်ယက် Polypropylene အထည် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊